မာနကြီး တဲ့ ဂိုဏ် ဆရာမ လေး – Hlataw.com
ဇော်ဇော် ကျောင်း က ပြန်လာ တိုင်း အိမ်တန်း တန်း မတ်မတ် ပြန်လေ့မရှိဘဲ ချွေးသံရဲနေ အောင် ဘောလုံးကန်ပြီးမှ ပြန်လေ့ရှိသည်။ သို့ပင်ငြားလည်း ၁၀ တန်းစာမေးပွဲကြီးနီးကပ်လာပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ဘောလုံးကန်ခြင်းကို စွန့်လွတ်လိုက် ရလေသည်….ထိုဟာတင်မကဘဲ အမေဖြစ်သူက ဂိုဏ် ဆရာမ တစ်ယောက်ကိုငှါး၍ အိမ်တွင်သင်ကြားခိုင်းခဲ့လေသည်။
သို့သော် ဂိုဏ် ဆရာမနှင့် ဇော်ဇော် အပေါက်အလမ်းသိပ်တော့တည့်သည်မဟုတ်ချေ… ဇော်ဇော် က ကျောင်းတွင် မက ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မည်သူ့ကိုမဆို အကြောခံသည်မဟုတ်ချေ…. ထိုကြောင့် ကျောင်းတွင် ရန်မဖြစ်သည့်ရက်က ရှားသည်…ရက်ကွက်ထဲတွင်လည်း ထိုနည်းတူ။ ကိုယ်က လက်ဦးမှုရမှကျေနပ်တတ်သူ…. ယခု မေမေ ခေါ်ပေးသော ဂိုဏ် ဆရာမက ထိုသို့မဟုတ်… လူကရက်ရက်စက်စက်လှသလောက် မာနကလည်း ကြီးသည်။
စကားပြောရာ တွင်လည်း အပေါ်စီးက…ဒါကို ဇော်ဇော် မကြိုက်ချေ… မေမေ့ သူငယ်ချင်း၏ တူမဖြစ်နေသောကြောင့်သာ။ “ဇော်ဇော် မင်းမနေ့က စာ အလွတ်ရပြီလား” “မရသေးဘူးဗျာ” (ပမာမခန့် ပုံစံဖြင့်) ” မင်း ငါပြန်သွားပြီး တစ်ချိန်လုံး ဘာလုပ်နေလဲ ” ” တီဗီ ကြည့်နေတာလေ. … ဘာလဲ စာဘဲနေ့ည လုပ်နေရတော့မာလား … သောက်ပိုတွေ…” ဖူးကလျာ ဘဝ မှာ ကျောင်းသားပေါင်းများစွာ ဂိုဏ် လုပ်ဖူးသည်…သူ့ကို ဒီလိုပြန်ပြောရဲ တာဆို၍ ဒီကောင်စုတ်လေး တစ်ယောက်သာရှိသည်။ ဒါကို သူမ မကျေနပ်နိုင်… နာမည်နှင့်လိုက်အောင် ဖူးပြီးနီရဲသောနှုတ်ခမ်းလွာနှစ်ခုကို ပြတ်ထွက်လုမတက် ကိုက်ကာ မျက်ဝန်း အစုံတို့က ထောင့်ကပ်ကာ ဒေါသ ကြောင့် စကားများတစ်ဆို့သွားသည်။
ထိုနေ့ာက်… “ဇော်ဇော် မင်းကိုငါ စာမသင်တော့ဘူး… မင်း ငါ့ စေတနာတွေကို စော်ကားတယ်” မျက်ရည်များ တလိမ့်လိမ့်ထွက်လာကာ…ထ ထွက်ရန်ပြင်ပြီးမှ…ဇော်ဇော့် အမေနှင့်အဖေ ပြန်ရောက်လာတာနှင့်ပက်ပင်းတိုးလေသည်။ “ဟဲ့ ဟဲ့ ဘာဖြစ်ကြတာလဲ သမီးရယ် မျက်နှာလဲမကောင်းပါလား”… ” သမီးသူ့ကို ဂိုဏ် ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး အန်တီ…..သူသမီး..ဘာညာဘာညာနဲ့” ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြလေသည်။
“ကဲကဲ သမီး ခနထိုင်ဦးနော် …ဟိုကောင် ဇော်ဇော် အပေါ်ထပ်ကိုတက်စမ်း…. နင်နဲ့ငါနဲ့ကတော့ တွေ့ပြီ..ဟင်း..ဟင်း..” အမေ ဖြစ်သူက ကြိမ်းလိုက်သဖြင့် ဂရုမစိုက်သည့် မျက်နှာပေးဖြင့် အိမ်အပေါ်ထပ် တက်သွားလေသည်။ ဇော်ဇော် တစ်ယောက် တစ်ပတ်စာမုန့်ဖိုး ဖြတ် ခံလိုက်ရသည့်အပြင် စာကျက်ချိန်ပြီးလျှင်လည်း တီဗီ ကြည့်ခွင့်ပါရတော့မည်မဟုတ်ချေ။ ပို၍နာကျည်းသွားလေပြီ…. မနက်ခင်းတွင် ဇော်ဇော် တစ်ယောက် အားကစားလိုက်စားသူ ပီပီ အပေါ်ပိုင်းဗလာ အောက်ပိုင်း တွင်ဘောလုံးကန် ဘောင်းဘီ နှင့် ခြံထဲတွင် တစ်ယောက်ထဲ ဘောလုံးကန်လေ့ကျင့်နေလေသည်။
” သား ခနနေ မင်းဆရာမလာတော့မယ် နော် … သွားရေမိုးချိုး အဝတ်အစား လဲပြီးတော့စာလုပ်တော့.” ” ဟုကဲ့ မေမေ” ဟု ဆိုကာ နောက်ဆုံးအနေနှင့် ဘောလုံးကို တအားလွဲကန်လိုက်လေသည်။ “အားးး….” ဟူသာ အသံနှင့်အတူ တံခါးပေါက်နားတွင် လူတစ်ယောက်လဲကျ သွားသည်ကိုတွေ့လိုက် ရလေသည်။ ကာင်မလေးတစ်ယောက် အသံ ဖြစ်သည်၊ ဇော်ဇော် အပြေးအလွား သွားကြည့်မိသည်။ ” ဟင် …တီချယ် နာသွားလားဟင် “…ဟု ဆိုကာ လဲကျနေသောတီချယ်အနားကပ်ကာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး ထူရန် လက်ကမ်းပေး လိုက်လေသည်။
ဖူးကလျာအခုမှ ကောင်လေးကိုသတိထားမိ သည်။ ဘောလုံးဘောင်းဘီ အဖြုရောင်နှင့် အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်းနေသော ခန္တာကိုယ်မှာ တစ်မျိုးကြည့်ကောင်းနေပေသည်။ဇော်ဇော်က အသားတော်တော်ဖြူသူမို့ အဆီပိုမရှိသောပေါင် သလုံးတို့မှာ သွေးကြောလေးများပင်မြင်နေရ သည်။ သူကိုကြည့်နေသော မျက်လုံးအစုံတို့မှာလည်း တခြားသူများလို အနက်ရောင်မဟုတ်ဘဲ အညို ရောင်သန်းနေလေသည်။ ချွေးများစိုနေသော် လည်း အနံ့ဆိုးများမထွက်ဘဲကိုယ်သင်းနံ့ သင်းသင်းလေးသာရနေပေသည်၊ ဖူးကလျာ ရင်ခုန်ချင်သလိုပင်ဖြစ်သွားသည်။
ဇော်ဇော်စိတ်ထဲမာလည်း မိုးကာသားစကပ် ကို ပေါင်မပေါ်ရုံတမယ်ဝတ်ထားပြီး…ဒေါက် မြင့်ဖိနပ် ကိုစီးကာ နီရဲအောင်ဆိုးထားသောနှုတ်ခမ်း နဖူးကျယ်ကျယ် အကျီကိုယ်ကျပ်နှင့် အမို့အမောက်အဖုအထစ် များဖြင့် လှချင်တိုင်း လှနေသော တီချယ့်ကို မာနမကြီးရင် ဒီထပ်ပိုလှမှာဟု စိတ်ထဲတွင်ကြိတ်ချီးကျူးနေလေသည်။ ဖူးကလျာက ဇော်ဇော့်လက်ကို အားယူပြီး ထလိုက်ရာ ကြီးမားစွင့်ကား ပြီး မိုးကာသား စကပ်ကြောင့် ပြောင်တင်းနေသော တင်ပါးကြီး များ၏ဒဏ်ကို ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်များက မခံနိုင် သောကြောင့် တစ်ဝက်လောက်ဘဲထကာ ပြန်လဲကျလေသည်။
ဇော်ဇော် လက်ကိုကိုင်ထားသောကြောင့် ဆွဲလဲချသလိုဖြစ်ကာ နှစ်ယောက်သား ထပ်ရက်လဲကျလေသည်။ ဇော်ဇော် မှာ ဖူးကလျာ၏ အလှများကိုမြင်ကာ ဖွားဘက်တော်မှာ တောင် လျက်နှင့်ပင် တီချယ်၏ ပေါင်ကြားဝသို့ တည့် တည့် ညပ်မိလေသည် နှစ်ဦးသား စက္ကန့်ပိုင်းမျှ ငြိမ်သက်သွားလေသည်….– ဇော်ဇော်မှာ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နှင့် စာထဲ အာရုံရောက်သွားသော်လည်း ဖူးကလျာကမူ ကောင်လေးကို ခနခန ခိုးကြည့်နေတတ်လေသည်။
အပေါ်ပိုင်းအကျီ ပြန်ဝတ်ထားသော်လည်း ခုနက ဘောလုံး ကန်ဘောင်းဘီကို ဝတ်မြဲဝတ်ထားလျက်ပင်။ စကပ်ကြားထဲထောက်မိသော ဇော်ဇော့် လီးကြီးမာ မည်မျှခန့် ကြီးမလဲဟုတွေးရင်း စပတ် အတွင်းသားထဲမှတဆစ်ဆစ် နှင့် အရည်များပင်တတောက်တောက်စိမ့်ထွက် လာလေသည်။ “ဇော်ဇော်.. တီချယ် အိမ်သာ ခနသွားဦးမယ် သေချာကျက်နေနော်” ဟုဆိုကာ…ထွက်လာခဲ့လေသည်။ အိမ်သာထဲသို့ရောက်သော်…. စကပ်ကိုချွတ်ကာ အပန်းရောင် ပင်တီထဲမှ စပတ်လေးကိုဖြဲကြည့်မိသည် “အားပါးပါး..အရေကြည်လေးတေစိမ့်နေတာဘဲ” တစ်သျူးနှင့်အသာအယာသုတ်ကာ ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒေါက်ဖိနပ်သံ ကြားကတည်းက တီချယ် ဖူး ဝင်လာပြီဆိုတာသိလိုက်ပြီ… ဖူးကလျာ ထိုင်ခုံပေါ် စွေ့ကနဲဝင်ထိုင်ရင်း “ဇော် မင်းရည်းစားတွေ ဘာတွေ ရနေပြီလား” “ဗျာ… မရှိပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲ” “ဒီအတိုင်းမေးကြည့်တာပါ” အရင်ကလို ဇော်ဇော်လို့ မခေါ်ပဲ ဇော် ဟု တစ်လုံးထဲ ဘာလို့ ခေါ်သလဲလို့ စဉ်းစားနေစဉ် တီချယ်၏ခြေချောင်းလေးများက ဇော်ဇော် ၏ ပေါင်ပေါ် ဖြေးဖြေးလေးတက်လာနေသည်။ မ အတွေ့အကြုံမရှိသူမို့ နရင်းများထူပူသွားလေသည်။
လီး ကလည်းငေါက်ကနဲ ထလာသည်။ တီချယ်က ဖြေးဖြေး ချင်းခြေထောက်နှင့် ဘောင်းဘီကို အပေါ် ဘက် လိပ်တင်လိုက်သည်။ ဇော်ဇော်အသက်ပင် မှန်မှန်မရှုရဲ။ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်နေစဉ်… ဖူးကလျာက ထလာပြီး… “ဇော် မေမေ့ကိုပြန်ပြောမာလား” ဇော်ဇော် ခေါင်းသာရမ်းပြနိုင်တော့သည်။ “အိုခေ မင်းကို ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်.. လာ.. မ ဘက်လှည့်လိုက်” ဟုဆိုကာ ထိုင်ခုံကို ဆွဲလှည့်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် ဖူးကလျာက ဇော်ဇော့် အကျီ ဘောင်းဘီ အကုန် ချွတ်ကာ ထိုင်နေစေသည်။ ဇော်ဇော်မှာကား အရုတ်ကျိုးပြတ်သကဲ့သို့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ ဖူးကလျာ လုပ်သမျှ ကိုသာ ထိုင်ကြည့်နေမိလေသည်။ ” ဝိုးး.. : အကြီးကြီးပါလား? ” ဇော်ဇော်၏ လီးကြီးမှာ ဖြူ ဖွေးနေပြီး တောင် သည့် အဆင့်သို့ မရောက်သေးသော်လည် တော်တော်ပင်ကြီးနေပေသည်။ ဒစ်အရေပြားမာ ကွမ်းသီးလုံးခန့်ရှိသော လဒစ်ကြီးကို မဆံ့မပြဲ ငုံထားနေရသည်။ ဖူးကလျာက ဇော်ဇော်၏လီးကြီးကို လက်ဖြင့် သာသာဖွဖွလေးကိုင်ကြည့်သည်။ ဇော်ဇော်မှာမျက်လုံးလေးများစင်းသွားလေသည်။
“အမလေး ကိုယ်တော် ဘာမှတောင် မလုပ်ရ သေးဘူး၊ ဖြစ်ပျက်ပြနေလိုက်တာ မိန်းမ ကိုင်တာ တစ်ခါမှ မခံဖူးဘူးလား” “ဟာ မ လည်း….ကိုယ့်ဟာကိုတောင် တအား ဖီးး လာမှ ခနတဖြုတ်ဘဲကိုင်ဖူးတာ… အကြာကြီးမကိုင်ဖူးဘူး”… ဟုတ်လည်းဟုတ်သည် ဇော်ဇော်က လူပျိုဝင် တာနောက်ကျသည်။ လရည်တောင် ၁၀တန်း နှစ်ကမှ ထွက်သည်။ ဒါတောင် ဂွင်းထု၍ လဒစ် က အဆုံးထိမပြုတ်သေး၊ တစ်ဝက်လောက်သာ ပွင့် သေးသည်။ “ဟုတ်လို့လား ကောင်လေးရယ်” ဟုဆိုကာ လီးထိပ်မှကိုင်၍ အရေပြားကို ဆွဲချပြီး ဂွင်းထုပေး မလို့ရှိသေး…ဇော်ဇော့် ထံမှ “အား မရဘူး နာတယ် နာတယ်” ဟု အော်မှ လွှတ်ပေးလိုက်လေသည်။
ဖူးကလျာ စိတ်ထဲမှ ‘အင်း ဒီကောင်လေး ဒစ်တောင်မပြုတ်သေးဘူး ထင်တယ်’ အရေပြားကို ပြန်ဆွဲကြည့်ရာ တင်းနေသဖြင့် …. “စောက်ကောင်လေး နင်ဂွင်းမထုဘူးလား” “ထုတယ် …ဒါပေမဲ့ သူများတွေလို မဟုတ်ဘူး၊ အပေါ်ယံ ပွတ်လိုက်တာနက် ပြီးသွားတယ်” “မင်း ကို မ ဒစ်ဖြုတ်ပေးမယ် လိုးရင် မနာအောင်… ဒီတိုင်းဖြုတ်ရင် နာလိမ့်မယ် …ခေါင်းလိမ်းတဲ့အဆီရှိလား? ” “ဟဲကုတ်စ် တော့ရှိတယ် မ… အိပ်ခန်းထဲမှာ” ၂ဦးသားတိုင်ပင်မထားဘဲ ထလိုက်လေသည်။ ဇော်ဇော် က ရှေ့မှ အိပ်ခန်းဆီသို့သွားလေ သည်။ အခန်းထဲရောက်သော် ဖူးကလျာက အဝတ်အားလုံးကိုချွတ်ပစ်လိုက်လေသည်။ “ဇော် မင်းကုတင်ပေါ်မှာ အိပ်လိုက်” ဟဲကုတ်စ် ဘူးကိုယူကာ လက်ဖဝါးထဲထည့်၍ လီးတစ်ချောင်းလုံးကို အထက် အောက်ပွတ် ဆွဲပေးနေလေသည်။ အရေပြားကြားထဲ အဆီ များကိုလောင်းထည့်ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲပေးနေလေသည်။ “အား အား ဟင်း ဟင်း အား” လီးထိပ်တစ်ခုလုံး စပ်ဖျင်းဖျင်း နှင့် ဇော်ဇော် တစ်ယောက် အိပ်ယာထက်တွင် ကောင်း သော အရသာများ ရောထွေးခံစားနေရသည်။
“အားးး…ရှီး ရှီးရ် …….ရှီး” နှုတ်ခမ်း နစ်ခု ကို တွန့် ပြီး ဟကာ သွားစိ၍ အပြာကားများထဲမှ ဘိုမများလုပ်သကဲ့သို့ ဂွင်း ထု နေလေသည်။ “အ အား ထွက်ပြီ ထွက်ပြီအားအား….” ဇော်ဇော်တစ်ယောက် အကောင်းဆုံးအထွဋ်အထိပ်စည်းစိမ် ကို ခံစားလိုက်ရလေသည်။ “ကောင်စုတ်လေး ခုမှ ခလေးရှိသေးတာကို လူမိုက်ဆိုဒ် လာဖမ်းနေတယ်… ခ်ခ်” “ဘယ်နားက သေးလို့လဲဗျာ လူကြီးဖြစ်နေပါပြီ”.. ” ဒစ် တောင် သူများ က ဖြုတ်ပေးရတာကို ကိုယ်တော်လေး တော်တော်ကြီးချင်နေ ခနနေကြရင်သာ အမြန်မပြီးစေနဲ့ ” “ဟုတ် ..” ဖူးကလျာက ရျွန်းလဲ့သောမျက်လုံးများဖြင့် ပျော်ယ့ခွေသွားသော ဇော်ဇော် လီးကြီးကို ကိုင်ကာတစ်ချက်နှစ်ချက် ကိုင်ပြီးထုပေးလိုက် ကာ…. “နာနေသေးလား ဇော်” “အွန်း..သိပ်မနာတော့ပါဘူး ပြုတ်သွားပြီး ထင်တယ်” ဖူးကလျာ လီးထိပ်ကို နှုတ်ခမ်းဝမှာတေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းမျင်း ကာစုပ်ပေးသည်…. “အီး အား အူးဟင်း …..” ပြီးနောက် ဟဲကုတ်စ် များကို စပတ်တွင်သုတ် လိမ်းလိုက်လေသည်။
ဇော်ဇော် ပေါင်ကို ခွကာ လဒစ်ကြီးအား အဆုံးထိဆွဲလှန်၍ စောက်ဖုတ် အပေါက်ဝတွင် တေ့လိုက်သည်… “အွန်း … ” မျက်လုံးလေးများမှိတ်ကာ ဖိချလိုက်လေသည်။ လက်က မူ လီးကိုကိုင်ထားဆဲ…. “မ လီးထိပ် ဝင်သွားပြီ အ အ့ စ်” ဇော်ဇော်က ကပြောလိုက်ရာ လက်ညိုးလေးနှင့် ဇော်ဇော် ပါးစပ်ကို ပိတ်ကာ “ရူးးး” ကျန်လက်တစ်ဖက်က လက်ညိုးနှင့်လက်မကို သုံးကာ ဂွင်းထုပေးနေလေသည်….. ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိချနေလေသည် ….. “အွန့်…အား…..အားးစ်စ်” လီးတစ်ချောင်းလုံးစပတ် ထဲဝင်သွားပြီ….. ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြန်ချွေနေသည်ာ လီးတစ်ဝက်လောက်ပြန်ပေါ်လာလေသည်။
ဇော်ဇော့်လက်နှစ်ဖက်ကို ယူ၍ ဖင်ကြီးနှစ်လုံး ပေါ် တင်ထားပေးလေသည်။ တစ်ဝက်လောက် ထုတ်သွင်း ၁၀ ခါလောက်လုပ် လိုက်တော့ စပတ်နှင့်လီး အသားကျကာ စီးစီး ပိုင်ပိုင်ဖြစ်လာလေပြီ။ “အီးအီး အွန်း….” “ကောင်းလား ဇော်” “အရမ်းရမ်းဘဲ…..ကောင်းတယ်” ပြောရင်း ဇော်ဇော်က အောက်က ပြန်ဆောင့် ပေးတတ်လာသည်။ “အွန်း…ဟုတ်ပြီ… စောင့်ထား.. ဇော်… အား…. စ် အား….စ် ..ရှီ… ရှိး…” လက်ဖြင့်စပတ်ကိုပွတ်ကာ ဘိုမများ ညည်း သကဲ့သို့ ညည်းညူနေလေသည်။ “အ့ မ ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်…အ့ အား….” “အင်း…စောင့်ထား နာနာဆောင့်ပေး မ လည်း ပြီးတော့မယ်….အ့ အားး…အားးး” ဘွတ် ဘွတ် … ဗြစ် ဗြစ် ဗြစ် “အ အား အား ….” “ပြီးး….ပြီးး…ပြီးပြီ…. အ့ အား အား အားးး… ” အားကုန်စောင့်ပြီး ၂ဦးစလုံးပြိုင်တူ ပြီးသွားလေ သည်။ အခုတော့ ဇော်ဇော်တစ်ယောက် မာနကြီးတဲ့ ဂိုက်ဆရာမလေး ဖူးကလျာကို အချိန်မရွေး လိုးနေတဲ့ ကျောင်းသားအလိမ္မာလေးအဖြစ် စာကျက်နေပါပြီ။ ပြီးပါပြီ…။